Talooyin Fiican oo aad Ku farxad Galinkarto Waalidkaaga | STN Somali
Home Wararka Talooyin Fiican oo aad Ku farxad Galinkarto Waalidkaaga
Talooyin Fiican oo aad Ku farxad Galinkarto Waalidkaaga
Mar walbo oo waalidkaa da’adiisu waynaato, waxuu u baahanyahay daryeel gaar ah iyo inaad jaceyl tusto xitaa hadii aad adiga waynaato oo aad noqoto aabo xaas iyo caruur leh.
Waxaa jira 4 waxyaabood oo fudud oo aan kugu kalifeyn wax badan, hase yeeshee hadaad sameyso farxad galineyso waalidkaaga, sida aad ka eegi doonto warbixinta soo socota.
1) La xiriir
Hadii aad kala fogtihiin waalidkii la xariir mar waliba. In aad waalidkaa telefoonka ka wacdo waqti ka waqti , ama si joogto ah maalinkii dhowr jeer aad u wacdid, amaba xitaa aad soo booqatid ayaa ah arin aad u wanaagsan oo kor u qaadi karto mooraalkiisa, waxuu dareemi waalidkii inuu jiro qof daryeelaayo oo jecel isla markaana daneynaayo inuu ogaado waxyaabaha ay u baahanyihiin isla markaana ka caawin karo.
Guriga ayaa ah meesha ugu badan ee waalidka ku qaataan badanaa waqtigooda, Maaddaama ay sii waayeeloobaan, araggoodana uu sii daciifayo ku dadaal sidii ay ugu raaxaysan lahaayeen hooygooda, iftiinka guriga oo dhan xooji, sidoo kale ka saara guriga waxyaabaha ay u baahneyn ama keeni karaayo in ey ku kufaan amaba culays u keeni karo dhaqdhaqaaqooda.
Markuu waayeeloobo waalidka, waxaa uu jecelyahay inuu ku dadaalo Aakhiradiisa, Waxaa laga yaabaa inuu ka fikraayo wax un inuu sadaqeysto maalintii, ama uu saacido dad qaraaba ah oo aadan ogeyn adiga baahiyadooda, marka waliidkaa u qoondee lacag, taasoo uu markuu u rabo ku caawiyo dadka kale, waayo howlahaasi caawimaada ku saabsan waxay dhisaysaa moraalkooda niyadeed.
Markii la eego Marxalada uu ku jiro waalidka ee gabowga ah, waxaa muhiim ah inaad dhakhtar geeysaa mar waliba oo aad waxyar oo xanuun ah ka dareento, tilaabadaasi ayaaa waxa ay dareensiini in aad mudnaan siineyso waalidkaa noloshooda, waxay dareemayaan markaad yareed sidii ay kuugu dadaali jireen oo marwalba wax kugu dhacaan dhakhtar kuula ordi jirteen oo kale inaad u sameyneyso.
Sidoo kale ogow dabeecadahooda, cunada ay jacelyihiin iney qaataan, amaba ku haboon da’deeda, iskuna day inaad ka caawiso inay joogteeyaan cunadaas.
Previous articleKumuu ahaa Ninkii Soo Muuqday Isagoo Ashahaadanayo kadib Weerarkii New Zealand?
Next articleRa’yi aruurin: Wadamadda qaabilo qaxootiga maxay ka aaminsanyihiin Muhaajiriinta?